ငွေလမင်း: လူမဖြစ်တတ်သော ကောင်မလေးနှစ်ယောက်
အမွှာပူးသမီးမွေးစဉ်က ပြုံးပျော်နေသော သမ္မတဟောင်းဂျော့ဘွတ်
berbera နဲ့ Jenna
အတာသင်္ကြန် အတွင်းက နာရေးကူညီမှု့အသင်းရန်ကုန်လည်း တော်တော်လေးကို မအားမလတ်ရှိ ပြီး၊ နာရေးကိစ္စအ၀၀ကို ကူညီပို့ဆောင်ပေးရသည်ဟူသတတ်၊ ထိုကဲ့သို့မအားမလတ်ပို့ဆောင် သဂြိုလ်ရ သည့် အခါတွင်း တွင် ရန်ကုန်တွင်သေဆုံးသူပေါင်း ၁၇၅ဦးကို အန်ကယ်ကျော်သူက ဦးစီးပြီး အသုဘ ကိစ္စအ၀၀ အတွက် ပို့ဆောင်သဂြိုင်္လ်ပေးခဲ့ရသောဟူ၏။
ထိုသတင်းတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအရ သေဆုံးသူ တစ်ဝက်မှာ သင်္ကြန်ရေဆော့ကစားရင်း အရက်မူး လွန်ပြီး သေဆုံးသူများ ဖြစ်တယ်လို့သိရပါသေး၏၊ တချို့မှာ အသက် ၁၅/၁၆ ကျော်ကျော်မိန်း ခလေးတွေ တောင်ပါဝင်တယ်လို့ ပြောပြတဲ့လူက တအံ့တသြကြီး ပြောပြနေလို့ သဘောကျမှိသေးတယ်။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဂျီတော့ကနေ သူငယ်ချင်းမတစ်ယောက် အခါတွင်း ပျော်ပါး ဆော့က စားရင်း ၊ အရက်မူးလွန်ပြီး သေချင်းဆိုးသွားရှာတယ်လို့ သတင်းပေးလာလို့၊ကိုကိုငွေကလဲ အားကျမခံ မောင်ရင်ရယ် ၁၅/၁၆တွေ အရက်သောက်လို့ သေတာဘာများဆန်းလို့ တုန်း ဘိန်းတောင်ရှုနေမှဟုတ်စာ ၊ သူကပြန်ပြောပါတယ် ကျွန်တော့်ကို `မင်းကလဲကွာ´ မကွာနဲ့ မောင်ရင်ရဲ့ ဒို့နိုင်ငံရဲ့ တချို့သော အရပ်ဒေသတွေမှာ တချို့မိဘတွေ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ သားသမီးတွေကို အရက်ဆိုင်လွတ်ပြီး အရက်ဝယ်ခိုင်းတယ်မောင်၊ စာသင်ကျောင်းနားမှာ ဘီယာ ဆိုင်ရှိတယ်မောင်၊ ထန်းတောထဲမှာ တက္ကသိုလ်ရှိတယ်မောင်၊ တက္ကသိုလ်ဝန်းကျင်မှာ ဘော်ဒါလို လို ဘာလိုလိုနဲ့ မာဆပ်ဖွင့်ထား တာရှိတယ်၊ နောက်ဆုံးကွာ ဆောင်ကြာမြိုင်တောင်ရှိနေသေး တယ်မင်းဘာပြော ချင်သတုန်းမောင်ရင်။
`အိုကွာ´ လို့သူကတခွန်းဘဲပြောနိုင်တယ်၊ ကျွန်တော် လဲ ဆက်ပြောလိုက်သေးတယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ လည်ခေါင်မှာ ယာမလိုစိတ်ကြွ ဆေးပြား ၀ယ်လို့ရတယ် ပိုက်ဆံတတ်နိုင်လို့ကတော့ မူးယစ်ဆေး မျိုးစုံရတယ်ကွ၊ ဒီလိုဖြစ်နေမှ တော့ သင်္ကြန်ရက် အရက် သောက်ပြီး ကာလနာ တိုက်တာ ဘယ်တတ်နိုင် မတုန်းလို့ ဘုတောတော လိုက်မှိပါတယ်။
ဒီလိုသတင်းမျိုးတွေ ကိုကိုငွေတို့ ၀န်းကျင်မှာ ရိုးဟိုးဟိုးနေပါ့မဟုတ်လား ဆေးမိလို့ ဘယ်လူ ကြီးသားက ဘယ်အဆိုတော်နဲ့ ဆေးချကြလို့ ရဲကမှိပေမဲ့ မဖမ်းရဲဘူး၊ ခနခနကြားတယ် ဘယ်သူ့သမီးနဲ့ ဘယ်သူ့သားက ဆေးလွန်ပြီးဆေးရုံရောက်ပြန်ပြီ စသဖြင့်စသဖြင့် အဲသလိုကြား ဖန်များတော့ နားတောင်ယဉ်နေပါပြီ၊ ဒါတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး စကားမစပ် လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၁ခုနှစ်က ဧပြီလလား မေလလား မမှတ်မှိဘူး၊ သတင်းတခုဖက်လိုက်ရသေးတယ်၊ အဲဒီအချိန်က အမေရိကန် နိုင်ငံရဲ့ ၄၃ဆက်မြောက် သမ္မတကြီး ဂျော့ဘုရှ် ရဲ့ အမွှာသမီးနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ berbera နဲ့ Jenna ဆိုတဲ့ ငတိမလေးနှစ်ယောက် ညကြီးအချိန်မတော် တက္ကဆက်ပြည်နယ်ထဲက Austin အရပ်မှာ ရှိ တဲ့ Chuy’s ဆိုတဲ့ ဘားလေးတခုမှာ သူများမှတ်ပုံတင်နဲ့ ဘီယာဝယ်မှိလို့ တက္ကဆက်ပြည်နယ်ရဲ့ ဥပဒေအရ အသက်၂၁နှစ်မပြည့်သေးဘဲ အရက်မရောင်းချခွင့်မရှိသောကြောင့် အဆိုပါ သတို့သမီး နှစ်ယောက်ကို ရဲကိုအကြောင်းကြား ပြီးဖမ်းဆီးသမှု့ပြုခဲ့လိုက်တဲ့ကြောင်းဖက်လိုက်ရပါသေး တယ်။
ရောင်းတဲ့ဆိုင်ကိုလဲ ပထမအကြိမ်ရောင်းချခြင်းကြောင့် ဆိုင်ကို ရက်ပေါင်း၆၀ ပိတ်၊ ၀ယ်ယူသူကို လည်း ဒဏ်ငွေ၅၀၀ပေးခိုင်းလို့ ကမ္ဘာတလွှား ဟိုးလေးတကျော်ဖြစ်တဲ့ သတင်းတမုတ်ဟုတ် ချင်း တောင်ပျံ့နှံ့ သွားသေးမဟုတ်လား။ ဖခင်ဖြစ်သူ သမ္မတကြီးခင်မျာ ၀ါရှင်တန်ကိုသွားဘို့ သမ္မတ အထူးလေ ယာဉ်ပေါ်ကိုရောက် နေမှ ရဲကဖုန်းဆက်လို့၊ တက္ကဆက်ကိုပြန်ပြီး အသက်၂၁ နှစ်မပြည့်သေးတဲ့ သမီး ငယ်လေးတွေ အတွက် ဒဏ်ငွေ၅၀၀ကို ကိုယ်တိုင်ပေးဆောင်လိုက်ရပြီး၊ သူ့သမီးလေးတွေကြောင့် ဆိုင်ပိတ် သိမ်းလိုက်ရတဲ့ ဆိုင်ရှင်ကြီးကိုလဲ ၀မ်းနည်းပါကြောင်း တောင်းပန်လိုက်ရသေးဆိုဘဲ။
အခါတွင်းမှာ သေခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေကို အရက် ရောင်းလိုက်တဲ့ ဆိုင်တို့ ဘီယာရောင်းလိုက်တဲ့ ဆိုင်တို့ကို နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး နေပြည်တော် ဆရာသိန်းက အဲသလို ဥပဒေဥပဒတ်တွေနဲ့ ထုတ်ပြန်တားမြစ်ထားရင် သိပ်ကောင်းမှာဘဲလို့ တွေးမှိလိုက်သေးတယ်။ သို့ကလိုမင့်လေလဲ၊ စိတ်ကူးဟာ စိတ်ကူးသာရှိတာဘဲပ ကိုကိုငွေတို့က ဘာအာဏာမှ မရှိပါ့ဘဲ ရှိတဲ့လူများ လုပ်ချင်ရင်လုပ်ဖို့ပေါ့ ။
ကဲနိဂုံးချုပ်မယ်ဗျာ ၊ ဟိုအမေရိကန် သမ္မတဟောင်းကြီးရဲ့ သမီးလေး နှစ်ယောက် ဘီယာမ သောက်ရဘူး ဟုတ်စ ၊ လာခဲ့မြန်မာပြည်ကို ဒီမှာ မင်းတို့ထက် ငယ်တဲ့ မြန်မာမိန်းခလေး တွေတောင် ဘီယာတို့ အရက်တို့ပေါပေါများများ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် သုံးဆောင် နေမှ ၊ မင်းတို့ ညီမဟာ ကံကိုဆိုးတယ်၊ လူစဖြစ်ဘို့ စဉ်းစားကတည်းက မြန်မာပြည်မှာ လူဝင်စားဘို့ ကောင်းတယ်၊ အခုတော့ အမေရိကန်သမ္မတ ကတော်ကြီး လော်ဒါဘွတ် ထံဝင်စားတော့ ဘီယာမ သောက်ရဘဲ အရှက် တကွဲအကျိုးနဲဖြစ်တာပေါ့ ၊ ဒို့ဆီက လူဆင်းရဲ တွေဆီမှာ သာဝင် စားလိုက်ရင် ၁၅/၁၆ လောက်နဲ့ ကလပ်လဲရောက်မယ်၊ ဘီယာ လဲ သောက်ရတယ် ၊ အရက် လဲသောက်ရတယ် +++++ +ဖြစ်တယ်ပေါ့ကွာ ပေါ့ကွာ။ နောင်များ လူဖြစ် တတ်ပါစေပေါ့….။
ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေကြောင်း ငွေလမင်းတို့ဆုမွန်တောင်းပါတယ်၊ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ..။
Posted by ငွေလမင်း at 4:27 PM
ငွေလမင်းတို့ဇနီးမောင်နှံလိုပဲ ဗမာပြည်မှာ ဝင်စားရမှာ နော့။
အင်း သေတဲ့သူလည်း မနေရဘူး။ ဒါနဲ့စကားမစပ် ထီပေါက်ရင် မြန်မာပြည် မပြန်ဘူးလာ။
ဟုတ်ပါ့နော။ မြန်မာပြည်လာစမ်းပါလေ့။ သောက်စမ်းပါ့ သေအောင်။
ဟေ့ မြန်မာပြည်ဆိုတာ ထေရ၀ါဒ ထွန်းကားဆုံးတိုင်းပြည်ကွ မယုံရင်လာကြည့်...
ကြီးကို တရားပွဲဆိုတာ ခွင့်ပြုမိန့်တောင်းရသတဲ့.
အဒိန္နဒါနာကို မင်းမှုထမ်းတိုင်း သိကြတယ်။
အခြေခံ လူတန်းစားမှ အလျှံပယ်ကြွယ်ဝသူထိ သူရာ အကြောင်း နောကြေကြတယ်...။
ဥတုဓမ္မတာ လာပြီဆိုကတည်းက ပခြုပ်ဆိုင် ထဲ ရောက်တဲ့ လူမမည်တွေ ဗလပွ
ပါဏာတိပါတ က ပြည်တွင်းစစ်ကို မငြိမ်းနိုင်
ပါဝါ ငွေကြေး ပြည့်သူရော မပြည့်သူရော ကာမေသု တွေ များများပိုင်ဆိုင်ကြတယ်။
မုသားမပါ လင်္ကာမချော စာသားကို မြန်မာလိုပဲ ဖတ်ဖူးသေးတယ်။
ဝေးဟေးဟေး . . . ဒို့များ လူဖြစ် ကံကောင်းလိုက်တာ . . ဒီလိုမှန်း တွေးမိရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ မိန်းကလေးသာ ဖြစ်လိုက်ချင်ပါတော့တယ်။ ပြီးရင် A B C တွေ လိုက်ဖြန့်လို့ ရတာပေါ့။
ဆရာသိန်းကိုတိုင် အင်းယားလမ်းထဲ လည်ပင်းဈေးဗန်းဆွဲပြီး အရက်နဲ့ ဆေးလိပ် မရောင်းရင်ကံကောင်းလို့ မှတ်။